Ndege ine vanhu vatanhatu vanokwira inonyangarika muFar East yeRussia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Ndege ine vanhu vatanhatu vanokwira inonyangarika muFar East yeRussia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ndege yeRussia Emergeny Ministry inonyangarika kubva kumaradhi eendege akatenderedza nzvimbo yeKhekhtsir Nature Reserve mudunhu reKhabarovsk muFar East yeRussia.
Ndege yeRussia Emergency Ministry yaAntonov An-26 ndege yakanyangarika kubva kumaradhi enhandare pedyo neKhabarovsk.
Ndege yaive nevashandisi vendege vatanhatu vevanhu uye yakanga ichiita ndege yehunyanzvi.
Kutsvaga kwakaomeswa nerima uye mamiriro ekunze asina kunaka, sekureva kwehushumiro hwevashandi.
Vezvenhau veRusgency emergency Ministry yeRussia vakasimbisa kuti ndege yayo yeAn-26 yakanyangarika kubva kumarairari ekubhururuka makiromita makumi matatu nemasere (38 mamaira) kubva kuKhabarovsk airport airport, kutenderedza nzvimbo yeKhekhtsir Nature Reserve mudunhu reKhabarovsk kuFar East yeRussia.
Ndege yaive nevashandi vekubhururuka vevanhu vatanhatu vaive muchikepe uye vaiita zvehunyanzvi kutiza, sekureva kwepepanhau basa.
"Panguva dza11: 45 kuMoscow nguva, Crisis Management Center yeRussia yeEmergency Ministry mudunhu reKhabarovsk yakagamuchira meseji yekuti Antonov An-2Ndege nhanhatu dzakanyangarika kubva kumarairari ekubhururuka 6 km kubva kuKhabarovsk airport airport, pamwe munzvimbo yeKhekhtsir Nature Reserve. Zvinoenderana nedatha rekutanga, paive nevashandi vekufamba nendege vevanhu vatanhatu, "akadaro musangano wevatori venhau, vachiwedzera kuti ndege iyi yanga ichiita nendege yehunyanzvi.
"Kutsvaga kwakaomeswa nenguva yerima yezuva uye mamiriro ekunze asina kunaka," hushumiro hwakawedzera.
Vanopfuura vanunuri makumi manomwe uye neherikoputa yekuona yakanga yaendeswa kunzvimbo yekufungidzirwa yekuparara.
Njodzi dzinosanganisira ndege dzakasakara musango reRussia uye kure Far East zvichiri zvakajairika.
Muna Nyamavhuvhu, vanhu vasere vakaurayiwa apo Mi-8 helikopta, iine vanhu gumi nevatanhatu, yakarovera mudziva pamupendero weKamchatka peninsula nekuda kwekusaonekwa zvakanaka.
Muna Chikunguru, imwe ndege ine vafambi makumi maviri nevaviri nevashandi vatanhatu vari mungarava yakarova sezvo yanga yave kuda kumhara muKamchatka, isina kusiya kana akapona.
Antonov An-26 (NATO inoshuma zita: Curl) ipatya-injini turboprop yemauto nemauto ekufambisa ndege, yakagadzirirwa uye inogadzirwa muSoviet Union kubva 1969 kusvika 1986.
Iyo An-26 inogadzirwawo pasina rezinesi chibvumirano kuChina neXian Ndege fekitori seY-14, yakazoshandurwa kuverengerwa muXian Y7 akateedzana.